China 1000ml orinasa mpamokatra tavoahangy soda tsy misy firaka sy mpanamboatra | Honghui Glass
Fanamboarana adidy mavesatra:
Ireo tavoahangy fitaratra azo ahodina dia natao haharitra. Izy ireo dia vita amin'ny vera maharitra izay manome fanoherana ambony noho ny fiovan'ny fiantraikany sy ny mari-pana. Ny fanidiana ny tariby vy sy ny satroka polypropylene dia manome fanoherana ny harafesina tsara ary tsy hikorontana na hikopaka toy ny chrome.
Azo antoka ho anao sy ny tany:
Ny fitaovana ampiasaina amin'ny fanamboarana ny tavoahanginay dia 100% tsy misy poizina, azo averina ary azo antoka ho an'ny tontolo iainana. Maimaimpoana izy ireo, maimaim-poana ary tsy misy phthalates izay mahatonga azy ireo ho vahaolana azo antoka kokoa raha mitaha amin'ny plastika. Amin'ny fampiasana an'ity tavoahangy vera azo ampiasaina ity dia manapaka ny fampiasana plastika ao an-tranonao ianao.
Cap azo antoka sy azo antoka:
Ny tavoahangin-veranay misy takona dia ahafahanao mitahiry menaka, zava-pisotro ary ranon-javatra hafa rehetra tsy misy ahiahy momba ny fikorontanan'ny fikorontanana. Ny fanidiana ny Clamp dia manome fiarovana ny ranon-drivotra, mahatonga azy io ho vahaolana fitehirizana tanteraka ho an'ny divay, zava-manitra ary fofona
SOSO azo antoka, LEAKPROOF: Ny tavoahangy fitaratra tsirairay dia misy plastika sy silika azo ampiasaina tsara izay hamehezana mafy ny tavoahanginao. Ny lasantsy entin'ny rivotra dia miantoka ny tsy fisidinan'ny zava-pisotro misy anao ary hijanona ho vaovao sy matsiro lava kokoa. Mora esorina sy apetraka ny satroka.
Lavorary amin'ny fampiasana US-MULTI: Ampiasao amin'ny tavoahangy fitahirizanao fitahirizana menaka, kefir, zava-pisotro, kombucha, Vinaingitra, labiera, rano na soda. Atsofohy amin'ny satroka fiaramanidina mba hitehirizana sy hitazomana ny fihavian'ny zava-pisotro sy ranon-javatra tianao indrindra.
METY, MAHAY METY: miditra, ireo tavoahangin-tseranana ireo dia vita amin'ny vera mahery sy madio; tonga lafatra amin'ny fampiasana maharitra sy miverimberina. Ny volavolantsika tery tery dia mamela handraraka mora tsy misy raraka tsy ilaina. Tsy misy tsara lavitra!
FAMPIASANA-MAFANA VOAFANA VOAFANA: Ny tavoahangin-tsika rehetra dia BPA, poizina, simika ary tsy misy firaka. Azonao atao izao ny mitahiry ny menaka, zava-pisotro na rano tsy misy ahiahy amin'ny fandotoana. Azo alaina amin'ny andiany 6, nanome toky izahay fa hanana tavoahangy ampy hampiasaina ianao.
PREMIUM HEVY-DUTY DESIGN: Miaraka amin'ny vatana fitaratra matanjaka sy matevina, ny Flip Top Bottles dia namboarina mba hanohitra tanteraka ny fiovan'ny mari-pana sy ny fiatraikany tsy nahy. Mba diovina dia ataovy ao anaty vilia fanasana lovia ny tavoahanginao.
Previous: Tavoahangy fisotro misy vera mazava 1000ml
Manaraka: Tavoahangy zava-pisotro mangarahara
Ambongadiny tavoahangy zava-pisotro
Tavoahangy fisotro misy karbaona
Tavoahangy fisotroana vera
Ambongadiny tavoahangy fisotroana vera
Tavoahangy rano ho an'ny zava-pisotro misy karbonika
Tavoahangy fisotro misy mangarahara 150ml
Tavoahangy zava-pisotro plastika 50ml
Tavoila fisotro plastika 1000ml ~ 750ml
Tavoahangy fisotroana bosoa 500ml